Uwabona njani amagama okugqitha kwii-asterisks ngala maqhinga | Iindaba zeGajethi
Ufuna jonga iphasiwedi emva kweenkwenkwezi? Kwabaninzi kuthi kuya kwenzeka kube kanye kubomi bethu ngenxa Isiko lokusebenzisa isikhumbuzi esingundoqo kwisikhangeli sewebhu, siyazilibala kwinqanaba elithile. Kungenxa yesi sizathu ukuba inani elikhulu labantu lizama ukubona iiphasiwedi ezifihliweyo emva kwee-asterisocs ezibonakala ngokubanzi kuloo ntsimi.
Ngoncedo lwezicelo ezimbalwa, izixhobo okanye ulwandiso kunye nezongezo kwizikhangeli zewebhu, siya kuba nethuba lokwenza njalo bona amagama okugqitha afihliweyo emva kweenkwenkwezi, into ekulula kakhulu ukuyenza ukuba nje sinokufikelela ngokupheleleyo kwinkqubo yethu yokusebenza kwikhompyuter yakho.
1 Ukujonga ukugqitha okufihliweyo
2 I-Asterisk Iphasiwedi yokuHlola ukufumanisa iipaswedi zethu ezilibalekileyo
3 Isitshixo seAsterisk ukubona amagama okugqitha emva kweenkwenkwezi
4 Sebenzisa ulwandiso kwisikhangeli se-Intanethi
5 Sebenzisa uMhloli wento ukujonga amagama agqithisiweyo
Ukujonga ukugqitha okufihliweyo
Olu lolunye uhlobo lokuqala esiza kuthi silucebise ngalo mzuzu, isixhobo onokukhuphela kuso iwebhusayithi esemthethweni yomqambi wayo. Ikhankanya ukuba iBulletsPassView iyahambelana kwimeko yokuqala kunye ne-Intanethi Explorer kunye nezinye iinkqubo, nangona ezinye iibrawuza ze-Intanethi ukungqinelana kunqunyelwe kwaye phantse kungabikho.
Umzekelo, iGoogle Chrome, iMozilla Firefox, iSkype, iOpera kunye neWindows Live Messenger (kwabo bangekazifaki ngokwe ingcebiso yethu apha ngasentla) ziya kuboniswa ngenqanaba elithile lokuhambelana nesi sixhobo.
I-Asterisk Iphasiwedi yokuHlola ukufumanisa iipaswedi zethu ezilibalekileyo
Esinye isixhobo esinomdla kakhulu osisebenzisayo yile, onokuyikhuphela nayo iwebhusayithi yonjiniyela nangona, ngesikhangeli esahlukileyo kuneGoogle Chrome. Ukuba uyayisebenzisa, uya kufumana umyalezo owazisa ukuba esi sicelo asinakho ukubona iipaswedi ezifihliweyo kwisikhangeli se-Intanethi.
Kungoko isicelo Kuya kufuneka uyifake kwiWindows, Eziza kuphonononga yonke into ebhalisiweyo kwezinye iibrawuza ze-Intanethi onokuthi uzisebenzise kwikhompyuter yakho.
Isitshixo seAsterisk ukubona amagama okugqitha emva kweenkwenkwezi
Ukuba akukho nasinye sezixhobo zokujonga iphasiwedi esazicebisa ngaphezulu komsebenzi ngenxa yento ethile yokungangqinelani, kuya kufuneka uzame le ndlela.
Njengale ikhankanywe ngasentla, Isitshixo seAsterisk igcina ukuhambelana okukhulu ne-Intanethi Explorer; nje ukuba usebenze esi sicelo, kuya kufuneka wenze njalo cinezela iqhosha elithi «Buyisa» Kwaye nge-voila, kwimizuzwana embalwa uya kuba nakho ukuncoma kujongano lwayo, uluhlu olupheleleyo lweephasiwedi, iphepha lewebhu elikhutshiweyo kunye nolunye ulwazi olongezelelweyo.
Sebenzisa ulwandiso kwisikhangeli se-Intanethi
Iiapps esizikhankanyile ngasentla bona amagama okugqitha afihlwe emva kweenkwenkwezi ziya kusebenza, xa ziqhutywa kwiWindows. Ngoku ukuba asifuni ukufaka into enjalo emva koko sinako sebenzisa kulwandiso olunomdla ehambelana zombini iFirefox kunye neGoogle Chrome.
Ukongezwa kweGoogle Chrome kunegama elithi Bonisa igama eligqithisiweyo kuJoliso kwaye libonisa kwindawo nganye (apho iphasiwedi ihlala ibhalwa khona) igama elisetyenzisiweyo; Singenza into efana kakhulu ne "bonisa igama eliyimfihlo" kwiFirefox, nangona apha kufuneka sisebenze okanye singasebenzi i icon ukuze sikwazi ukufihla ipassword.
Sebenzisa uMhloli wento ukujonga amagama agqithisiweyo
Ngokuqinisekileyo ukuba iqhinga lokubona amagama agqithisiweyo esiza kuwakhankanya apha ngezantsi aya kuba yeyona nto ithandwayo ngabantu abaninzi, kuba apha asizukubane sidingo sokufaka usetyenziso kwiWindows kwaye sibi ngakumbi, kufuneka sifake ukongeza okanye ulwandiso kwi-intanethi. Ngokwenyani into esiza kuyisebenzisa iya kuba iqhinga elincinci eliya kusinceda ukuba sibone ngokukhawuleza, iphasiwedi efihliweyo emva kwee-asterisks.
Vula isikhangeli sakho se-intanethi.
Yiya kwiphepha apho ii-asterisk ziboniswa khona ukuze ungene.
Cofa kabini kwezi asterisk ukuze uzikhethe.
Ngoku sebenzisa iqhosha lasekunene le mouse yakho kolu khetho kwaye ukhethe «Jonga uhlobo«.
Ukusuka kuyo yonke ikhowudi, fumana indawo apho igama «inombolo yokuvula«.
Khetha eli gama, licime ngokucinezela i «enter» isitshixo.
Ngokukhawuleza uya kuba nakho ukuncoma, ukuba kwicala lasekhohlo likhasi apho kufuneka ubhale khona iphasiwedi; ii-asterisks ziya kunyamalala kwangoko, kwaye uya kuba nakho ukubona amagama okugqitha asetyenzisiweyo ukuqala inkonzo.
Ngaba uyazi iindlela ezingakumbi zokujonga iipassword? Sixelele!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ujonga njani iiphasiwedi ezifihliweyo emva kweeasterisks
Enkosi ngegalelo lakho.
Olu hlobo lwesoftware luhlala luluncedo kakhulu.
Ndithatha ithuba lokubonisa ukhetho olukhawulezayo (ngaphandle kwesoftware) ukubonisa isitshixo:
-Siza kusebenzisa iGoogle Chrome
-Sikhetha isitshixo (zonke iinkwenkwezi)
Cofa ekunene-> Hlola
-Sitshintsha Uhlobo = »iphasiwedi» kuhlobo = »isicatshulwa»
Kwaye isitshixo siya kuboniswa ngokuzenzekelayo
Eloy Nuñez sitsho
Loyikisa iqhinga. Ndiyabulela kakhulu uJasape.
Phendula u-Eloy Nuñez
udaniel felipe carmona sitsho
Andazi ukuba iyasebenza
Phendula ku daniel felipe carmona
I-ER KUNF T YASETRIANA sitsho
KwiFirefox, ukuba ugcina amagama agqithisiweyo ukuze isikhangeli siwakhumbule, kwifestile apho zigcinwa khona kukho iqhosha elithetha into efana ne "bonisa ipassword"
UAtari ujoyina i-retro kunye nefashoni encinci kunye neAtaribox
INokia 8 ibonisa ngekhamera emibini evela kwi-ZEISS nokunye okuninzi